Podium: Uruurinta iyo Maareynta Faallooyinka Hal Madal Bartamaha ah | Martech Zone
Waxaan dhawaan aqrinayay qoraal ka yimid Joel Comm oo kusaabsan shirkad guurtay Dhaqdhaqaaqa Wareejinta Qadka Fiican. Waa sheeko xasaasi ah oo warshad ay ku badan yihiin khiyaanooyinka iyo farsamooyinka beddelashada. Mar uun baa la i afduubay oo aan dhaqaajinayn alaabtayda ka dib dhaqaajin qaran illaa aan ka bixiyo lacag caddaan ah jaranjarooyinka labaad Duulimaadkii labaad, marka la eego, wuxuu ahaa hal jaranjaro ka badan waxa qandaraaskoodu qeexay. Waxay ahayd mid xanaaq badan.
Gadiidleyda ayaa gabi ahaanba dab ku ciyaaraya. Kadib cilmi baaris kadib, Joel wuxuu aqoonsaday inay sumcad xun ku leeyihiin internetka. Shaki kuma jiro inay luminayaan macaamiil badan oo macquul ah iyagoo adeegsanaya qaabab ganacsi oo liita oo aan lala socon sumcadooda. Waa wax lala yaabo inay wali meherad ku jiraan.
Dhaqdhaqaaqa kor ku xusan lagama yaabo inay daneeyaan, laakiin shirkadaha intiisa badani waxay garwaaqsadaan waxyeelada ay soo saaraan joornaalada sida Joel ee dakhligooda. podium waa madal loo dhisay shirkadaha daneeya. In ka badan 30,000 adeeg bixiyeyaal iyo dukaanno ayaa adeegsada Podium si aysan u kormeerin oo keliya sumcadda internetka, laakiin sidoo kale si firfircoon u qabashada dib u eegista wanaagsan.
Barxadku wuxuu kormeeraa in ka badan 20 goobood oo dib-u-eegis kala duwan ah, wuxuu udub dhexaad u noqdaa natiijooyinka, wuxuuna ogeysiiyaa shirkadaha marka dib u eegista la daabaco. Ganacsiyada daryeela, tani waxay awood u siineysaa inay ka jawaabaan oo ay si dhaqso leh uga jawaabaan si ay u xalliyaan arrimaha hoos u dhigi kara iibka.
Podium wuxuu si otomaatig ah kaaga caawinayaa inaad mudnaanta siiso oo aad doorato boggaga dib u eegista ee muhiimka u ah ganacsigaaga. Laga soo bilaabo Google iyo Facebook illaa goobaha dib-u-eegista warshadaha ku takhasusay, tiknoolajiyadda 'Podium's SmartSelect' ayaa ka caawin karta macaamiishaada inay si hufan u galaan goobaha saamaynta ugu weyn ku leh ganacsigaaga.
Podium wuxuu awood u siiyaa ganacsiyada:
Ururi boqolaal dib u eegis ah samee macaamiishaada adoo adeegsanaya aaladooda moobaylka.
Maamul, ka warbixi, oo ka jawaab dhammaan dib u eegistaada internetka.
Si qoto dheer u arag Analytics dib u eegista ka socota in ka badan 20 goobood oo dib u eegis kala duwan ah.
Hel digniino-waqtiga-dhabta ah marka dib-u-eegista cusub ay si toos ah u socdaan.
Maskaxda ku hay in aysan si fudud u saameynaynin dib u eegista, qiimeynta ayaa sidoo kale si muuqata loogu soo bandhigay natiijooyinka raadinta iyo dhaqdhaqaaqa wuxuu saameyn ku yeelan karaa muuqaalkaaga raadinta deegaanka. Haddii aad ku jirtid warshad qiimeyn iyo dib u eegis loo adeegsado, waa inaad gebi ahaanba leedahay madal sida Podium ah si aad u maamusho sumcaddaada oo aad si firfircoon ugu qabatid dib u eegista weyn.
Daawo Muuqaalka Podium's 2 Daqiiqo Demo
Tags: qabashada dib u eegistadib u eegista facebookdib u eegista googlejoel commmaamul dib u eegistakormeer dib u eegistaururinta dib u eegista internetkamadal dib u eegis onlineFaallooyinka internetkapodiumxariifnimada podiumqiimeyntamaaraynta sumcadmaaraynta dib u eegistaqiimeynta seodib u eegistaqiimeynta xiddigaha
RTB-Media: Xayeysiinta Waqtiga-dhabta ah, Is-dhaafsiga Kanaalka iyo Aragtida